ပရိတ်သတ်တွေအချစ်ပိုသွားအောင် အသည်းယားစရာမျက်နှာထားလေးနဲ့ ကပြထားတဲ့ မေမြင့်မိုရ်ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး…. – Cele Snap
ပရိတ်သတ်တွေအချစ်ပိုသွားအောင် အသည်းယားစရာမျက်နှာထားလေးနဲ့ ကပြထားတဲ့ မေမြင့်မိုရ်ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး….
ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသမီးချောလေး မေမြင့်မိုရ်က တော့ အနုပညာေ လာကမှာ အချိန်အတိုတွင်း အောင်မြင်လာခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ MRTV –4ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ သရုပ်ဆောင်ရင်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ မေမြင့်မိုရ်ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကြောင့် လည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေ မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆော င်နေရတာကို တွေ့ရပါတယ်။
မေမြင့်မိုရ် က ချစ်စရာအပြုံးလေးတွေအပြင် တမူထူးခြားတဲ့ ပင်ကိုယ် အလှတရားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် ဘယ်လို ဖက်ရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ် လိုက်ဖက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏဆိုရင်လည်း သူမရဲ့ နေ့စဉ်လှုပ်ရှာမှုတွေ နဲ့ ချစ်စရာပုံရိပ်ေ လးတွေကို ဖော်ပြပေးပါတယ်။ ယခုတစ်ခါမှာလည်း မေမြင့်မိုရ် ပရိသတ်တွေ ငေးမောသွားရလောက်မယ့် Tik Tok ဗီဒီယိုလေး ကိုတင် ပေးလာခဲ့ပါတယ်။
ဒီဗီယိုလေးတွေထဲမှာတော့ မေမြင့်မိုရ် က သီချင်းလေးအတိုင်း အသည်းယားစရာ မျက်နှာထားလေးနဲ့ ဆော့ကစားထား တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ Tik Tok လေးကလည်း ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားပြီး ကြည့်ရှု့သူများတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကဲ…ပရိသတ်တွေလည်း မေမြင့်မိုရ် ရဲ့ Tik Tok လေးကို ကြည့်ရင်း အသည်းလေးတွေ ပေးခဲ့ ပါဦးနော် ။
ပရိသတျကွီးရေ မငျးသမီးခြောလေး မမွေငျ့မိုရျက တော့ အနုပညာေ လာကမှာ အခြိနျအတိုတှငျး အောငျမွငျလာခဲ့တဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူမကတော့ MRTV –4ရုပျသံဇာတျလမျးတှဲထဲမှာ သရုပျဆောငျရငျး ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတှကေို ရရှိခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ မမွေငျ့မိုရျရဲ့ ကွိုးစားအားထုတျမှုတှကွေောငျ့ လညျး ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှေ မှာ ပါဝငျသရုပျဆော ငျနရေတာကို တှရေ့ပါတယျ။
မမွေငျ့မိုရျ က ခဈြစရာအပွုံးလေးတှအေပွငျ တမူထူးခွားတဲ့ ပငျကိုယျ အလှတရားတှကေို ပိုငျဆိုငျထားတာကွောငျ့ ဘယျလို ဖကျရှငျတှပေဲဖွဈဖွဈ လိုကျဖကျနတောဖွဈပါတယျ။ မကွာခဏဆိုရငျလညျး သူမရဲ့ နစေ့ဉျလှုပျရှာမှုတှေ နဲ့ ခဈြစရာပုံရိပျေ လးတှကေို ဖျောပွပေးပါတယျ။ ယခုတဈခါမှာလညျး မမွေငျ့မိုရျ ပရိသတျတှေ ငေးမောသှားရလောကျမယျ့ Tik Tok ဗီဒီယိုလေး ကိုတငျ ပေးလာခဲ့ပါတယျ။
ဒီဗီယိုလေးတှထေဲမှာတော့ မမွေငျ့မိုရျ က သီခငျြးလေးအတိုငျး အသညျးယားစရာ မကျြနှာထားလေးနဲ့ ဆော့ကစားထား တာ ဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ Tik Tok လေးကလညျး ပရိသတျတှကွေားမှာ ရပေနျးစားပွီး ကွညျ့ရှု့သူမြားတာ တှရေ့ပါတယျ။ ကဲ…ပရိသတျတှလေညျး မမွေငျ့မိုရျ ရဲ့ Tik Tok လေးကို ကွညျ့ရငျး အသညျးလေးတှေ ပေးခဲ့ ပါဦးနျော ။
နီလာလက်စွပ်ကို မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် အကိုဖြစ်သူကိုပေးလိုက်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ဝေလာရီ…..
လူရွှင်တော်ကြီး ဦးဧရာ ကိုဗစ်ရောဖြင့် ယနေ့မနက် ၃ နာရီ ၃၉ မိနစ်အချိန်တွင် ကွယ်လွန်သွားပါပြီ….